Yechokwadi Yega Real Estate Branding
Real Estate Listings: » Real Estate Agent Directory » Real Estate Agents » US » Florida » Yechokwadi Yega Real Estate Branding1
Authentic Yemunhu Real Estate Kugadzira Dr. Hubert Rampersad [email protected] | www.realtorsamerica.wordpress.com Musika weimba wakagadziridzwa pamusoro pegore rapfuura uye unotarisirwa kuramba uchiita zvirinani mumakore anotevera, nyanzvi zhinji dzinobvumirana. Nekudaro, mune ino nyowani yekugara nzvimbo, mazhinji mafambiro ari kubuda kuti vatengi vepamba uye nyanzvi dzezvivakwa vanofanirwa kuchengeta mundangariro. Imwe yenyanya kukosha maitiro inosanganisira maitiro anosanganisira chaiyo yekumaka mazita muzera renhau rezvemagariro. Sezvambotaurwa, 70% yevatengesi 'kubudirira kwebasa kunogona kuverengerwa kune rake / rake chairo rekumaka uye hunyanzvi hwekuratidzira, maringe ne30% zvichikonzerwa neruzivo rwake rwezvivakwa. Nekudaro, vamiririri vezvivakwa vane hunyanzvi hwevanhu hunyanzvi vanowanzo kukwezva vatengi vazhinji nekutengesa zvakanyanya kupfuura avo vane ruzivo chete nezve Microsoft Office, komisheni chimiro, zvinyorwa, kuongorora, kuongorora, nezvimwe. Vanoshanda kwazvo vezvivakwa vanonzwisisa kukosha kwechokwadi kushambadzira wega mumusika wanhasi. Kune vamiririri vezvivakwa uye vatengesi, chaiyo yekumaka chiratidzo, kwakakosha kutanga yakasimba uye inoshanda kuvapo kwebhizinesi. Semumiriri wezvivakwa, iwe unofanirwa kutarisira pane idzva dzimba dzekuvaka nekuvaka ine simba chaiyo chaiyo brand. Rangarira, sarudzo zhinji dzekutenga dzinoenderana nekuvimba, kuvimba uye kunzwa kwekubatana kwevanhu vane hukama nechinhu, sevhisi, kana munhu. Ndohukama hwakavimbika uhwo hunoverengeka, uhwo kazhinji hunoratidzika kunge hwakakosha kupfuura kuita. Izvi zvese zvine chekuita nekumaka. Chiratidzo ndiko kutarisira, mufananidzo uye maonero aanogadzira mundangariro dzevamwe kana vachinge vaona kana kunzwa zita, chigadzirwa kana logo. Microsoft, Nike, Toyota, Volvo, uye Coca-Cola vanotiudza kuti vanoda sei kuti vamwe vaone zvigadzirwa zvavo. Aya Makambani / Makambani Makambani anotaurirana zvavanoda kuti maonero edu uye tarisiro yezvigadzirwa zvavo zvive. Kuderedza kushambadzira mitengo uye kuwedzera kushambadzirwa kwemusika inzvimbo dzinogona kunyatsoshanda nyanzvi dzezvivakwa. Vashandi vezvivakwa vanonzwisisa zvinodiwa nevatengi, vatengesi nevatengesi uye nei- uye vanogona kutove nyanzvi mune zvekuvhara - asi chii chinopatsanura avo vari pamusoro pepakiti ichiva nyanzvi yekuti vangasvika sei ikoko. Mumusika wemazuva ano wemusika, uko simba rakanyatso shanduka kuenda kumutengi, kuve 'kuwanikwa' uye kuwanikwa kune vese vanogona uye variko vatengi kwakakosha kwazvo. Kushambadzira kwakakosha kupfuura kushambadzira nekutengesa. Pane musiyano pakati pezviitiko zvitatu izvi: Kushambadzira kuri kuuya, kutengesa kuri kugutsa uye kushambadzira kuri kukurudzira. Kushambadzira ndekwekugadzira chiziviso chinobatanidza mamwe maonero, manzwiro, uye manzwiro neicho chiziviso. Kushambadzira kunoitika kushambadzira nekutengesa kusati kwatanga. Pasina chiratidzo chakasimba, kushambadzira hakubatsiri uye kutengesa kwakafanana nekurova musoro wako kumadziro ekushomeka kwekutengesa. Saka usatambisa nguva yako yese nemari pakushambadzira nekutengesa nekusawedzera zita rako. Ndezve .... verengazve http://tiny.cc/lic4fy --------------------------------- ------------------------------------------------------ ------------------------ Dr. Hubert Rampersad inozivikanwa seMunhu Real Estate Brand Kochi. Iye ndiye muvambi weRealty muAmerica muFlorida uye munyori webhuku rinotengesa zvakanyanya "Authentic Personal Branding yeReal Estate Agents" (IUF University Press, 2017) .Chinyorwa ichi chakavakirwa pabhuku idzva iri. Anogona kusvikwa pa [email protected] uye www.realtorsamerica.wordpress.com